I-Internet Ministries - Ukudoba nge-21st Century Net
Ukudoba nge-21st Century Net
I-Internet Ministries yasungulwa ngo-May 1, i-1995. I-Internet Ministries inikeza amasonto amaningi nezinamba eziningi zamaKristu futhi ilahlekelwe imiphefumulo iminingwane nolwazi mayelana noKristu nesonto lakhe. IZwi likaNkulunkulu lenziwa litholakale kunoma ubani e-Intanethi, futhi amaBhayibheli ethu e-intanethi afundwa ngabantu emazweni avimbela ukufunda imiBhalo Engcwele. Sinikeza ama-intanethi e-inthanethi ngesiNgisi, eSpanishi, eRussia, naseVietnam. Lokhu kufaka ikhophi ye-King James Version, i-American Standard Version, ne-Revised Standard Version. Izifundo ZeBhayibheli Ezi-intanethi zinikelwe kwabangewona amaKristu namaKristu. AmaBhodi wethu we-Bulletin e-Inthanethi anika ulwazi olubalulekile mayelana nezindaba kanye nezimemezelo zamasonto kaKristu emhlabeni jikelele.
I-Internet Ministries inikeza ama-Worldwide Izincwajana amasonto kaKristu, Ubulungu BamaKristu, Izikole Nama-Academy, Amayunivesithi, Izifundo ZeBhayibheli Nezikole Zokushumayela, izincwadi zoMfowethu kanye nomagazini, amabhuku ezitolo zobuKristu, amasonto anamasayithi e-intanethi, kanye neCatalog Catalogs amasonto kaKristu.
Amasevisi amaningana awaziwayo awaziwa yi-Internet Community nge-Church-of-Christ.org njenge-World Bible School, Roadmap Bible Series, iLads kuya Abaholi, uLambert Book House, i-Project USA Namuhla, i-World Christian Broadcasting, Amazwi I-Life Radio Ministry, i-Faulkner University, nabanye abaningi.
I-Internet Ministries inikeze isikhala sewebhu kumabandla nezinkonzo eziningi emhlabeni wonke ongenayo imali edingekayo ukukhuthaza iVangeli likaKristu kwi-intanethi. INkosi ifuna izinsizakalo ze-intanethi zizoqhubeka zikwazi ukukhonza amasonto kaKristu futhi zikhuthaze i-World Evangelism online.
Siyabonga ngokusekela kwakho ngomthandazo.